कथा : सचिवभन्दा कम हुने थिइनँ ! | Nepal123.com
कथा : सचिवभन्दा कम हुने थिइनँ !
Author: onlinekhabar2 Published Date: January 14, 2020 LeaveaComment on कथा : सचिवभन्दा कम हुने थिइनँ !
लहडै लहडमा एउटा अकाउन्ट खोले पनि फेसबुक चलाउन उतिसारो रुचि लिँदैनथे हरिहरजी । अलिअलि चलाउन थालेपछि पनि न प|mेण्ड रिक्वेष्ट पठाउँथे, न आएका रिक्वेष्टलाई एक्सेप्ट गर्थे । न केही पोष्ट गर्थे, न कुनै अन्य गतिविधि नै । खाली कहिलेकाहीँ खोल्यो, हेर्‍यो, बस् ।
दुईचार महिना यत्तिकै बिते । घर-स्कूल, अनि स्कूल-घर गर्दैमा जीवन चलिरहेको थियो । अलि पछि गोविन्द सरको संगतले भने उनलाई गज्जबकै फेसबुकप्रेमी बनायो ।
अब भने उनको लत फेसबुकमा मजाले बस्यो । फूलमा माहुरी टाँसिएझैँ ऊनी फेसबुकमा टाँसिन थाले । पलपलका अपडेटहरू राख्न थाले । खाएको, लाएको, हिँडेको, डुलेको, सुतेको, उठेको, भेटघाट गरेको सब अब फेसबुकमा अपडेट हुन थाल्यो ।
चाडवाड, मेला, भेलाका विशेष अवसरहरू त झन् छुट्ने कुरै भएनन् । ‘हरिहरले शौच बाहेकका सबै गतिविधि फेसबुकमा हाल्छ’ भन्ने कहावत नै बन्यो स्कुलमा ।
यत्तिकैमा हरिहरजीका कताकताबाट भिनाजु पर्ने एकजना मान्छे मन्त्री भए ।
राजनीतिमा लागेको वा नलागेको मान्छे को कतिखेर मन्त्री हुन्छ, ठेगानै हुन्न हाम्रो देशमा । गाउँ-टोलमा राजनीतिमा सक्रिय थिए हरिहरजी । तर, उनको राजनीतिक सक्रियताले केही फलाउन सकेको थिएन । ऊनी सक्रिय रहेकै दलबाट आज उनका भिनाजु पर्ने मन्त्री भए । उनको खुशीको सीमै रहेन ।
उनले चिनेको र हल्काफुल्का नै सही, उनलाई चिनेका मान्छे अहिलेसम्म यति ठूलो पदमा पुगेको यो शायद पहिलोपल्ट हो । त्यो पनि आफ्नै पार्टीका मान्छे । त्यसैले मन्त्रीज्यूलाई नभेटी नछाड्ने निष्कर्षमा पुगे ऊनी ।
तर, भेट्ने कसरी ? हल्का समस्या थियो । किनभने, एक त आफ्ना साख्यै भिनाजु थिएनन् । त्यसमाथि अघि-पछि नभेटेर मन्त्री भएपछि मात्रै भेट्न जाँदा के पो ठान्ने हुन् भन्ने पीर थियो ।
आ… जेसुकै सोचून् , जेसुकै भनून् भन्दै हृयाकुलाले पेलेर उनी शनिबारको दिन पारेर दिदी भिनाजुलाई भेट्न मन्त्री क्वार्टर गए ।
हरिहरलाई देखेर दिदीभिनाजु खासै छक्क परेनन् । किनभने, मन्त्री भएपछि नाता केलाउने, सम्बन्ध गाँस्ने, गाँसिएको सम्बन्ध नवीकरण गर्ने अनि सम्पर्क सूत्र विकास गरेर पहुँच बढाउन खोज्नेहरू थुप्रै आउँछन् भन्नेमा ती जानकार थिए । अभ्यस्त पनि हुँदै थिए ।
चाकडीमा उस्ताद हरिहरजीले भिनाजु पर्नेलाई खुट्टैमा ढोग्न लम्पसार मुद्रा तय गर्दा भए । तर, भिनाजुले हात अघि बढाए । ढोगभेटपछि स्वाभाविकरूपमा भिनाजुलाई बधाइ दिए । भिनाजुसँग दुई/चारवटा सेल्फी पनि भ्याइदिए ।
← संकटासँग बराबरीमा रोकिएपछि आर्मीले गुमायो शीर्ष स्थान
तिलोत्तमाको स्वास्थ्यचौकीमा चिकित्सकसहितको सेवा सुरु →